Rag loo haysto Shabaabnimo oo maxkamad lasoo taagay | KEYDMEDIA ONLINE
Rag dhallinyaro ah oo lagu soo eedeeyay fal la xiriira Shabaabnimo ayaa maxkamad lasoo taagay maanta, iyadoo la filayo in maxkamaddu ay go'aan ka gaari doonto eeddaas.
MUQDISHO, Soomaaliya - Maxkamada Ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya qeybta 27-aad ayaa maanta waxaa la hor keenay rag dhallinyaro ah oo loo heystay ka mid ahaanshiyaha Ururka Al-Shabaab ee ka dagaallama Soomaaliya iyo geeska Afrka oo dhan.
Dhallinyarada lagu soo eedeeyay falkan Shabaabnimada ah ayaa gaagaya 5 xubnood, waxayna mas’uuliyiinta maxkamadda ay sheegeen in laba kamid ah ay qirteen inay ka tirsan yihiin kooxda mayalka adag ee Al-Shabaab, halka saddex kalena ay beeniyeen oo ay iska dafireen kamid ahaanshiyaha kooxdaasi.
Guddoomiyaha Gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan iyo Saraakiisha Ciidamada kala duwan ee dowladda Soomaaliya ayaa maxkamadda maanta goobjoog ka ahaa.
Gudoomiyaha Maxkamadda Ciidamada qalabka sida qeybta 27-aad Garyaqaan Amiin Daacad ayaa sheegay in fadhiga maxkamadda oo loo haystay 5 ruux oo dhallinyaro ah oo loo haystay Shabaabnimo uu intaasi ku egyahay, isla markaana maxkamadda ay go’aan kasoo saari doonto eeddaas loo soo jeediyay raggaasi dhallinyarada ah oo laba kamida ay qirteen halka saddex kalena ay iska fogeeyeen.